တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာရန် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ကတိပြု - Xinhua News Agency
ဒက်ရှန်ဘီ၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိနှင့် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hossein Amir Abdollahianတို့ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။အီရန်အစိုးရသစ်စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးသည် အဆင့်အားလုံးတွင် အရှိန်အဟုန်မြင့်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ အပြုသဘောဆောင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီး ယင်းမှာ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဆင့်မြင့် ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တည်ရှိခဲ့ခြင်းကို ပြသရာရောက်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်း နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ တရားဝင်အခွင့်အရေးများ နှင့် အကျိုးစီးပွားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ထောက်ခံအားပေးကြောင်း ဝမ်က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်အနေဖြင့် အီရန်နှင့်နိုင်ငံအတူ လက်တွဲကာနှစ်နိုင်ငံဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ၊ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အတူတကွ တည်ဆောက်ရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တွန်းအားပေးရန် နှင့် စွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်များကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိ ကြောင်း ၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် အကူအညီများဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အီရန်နိုင်ငံ အားရှန်ဟိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်း (SCO) ၏ တင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာစေရန်
တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာများတွင် အီရန်နိုင်ငံနှင့် ညိှနှိုင်းမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန် ၊ ပူးတွဲဘက်စုံစီမံကိန်း၏ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ကို ဆောလျဉ်းစွာရရှိစေရန် ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အားလုံးပါဝင်သော နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေး လက်တွဲ မြှင့်တင်သွားရန် နှင့် အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးကိုနှိမ်နင်းရန်ခိုင်မာသော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
အီရန်-တရုတ် ဆက်ဆံရေးသည်မဟာဗျူဟာ မြောက်အရေးပါမှုနှင့်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်တစ်ခုရှိကြောင်း Amir Abdollahian ကပြောကြားခဲ့သည်။ အီရန်အစိုးရသစ်သည်နှစ်နိုင်ငံအကြား ပြည့်စုံသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ကိုအသေအချာအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ပို့ဆောင်ရေး၊ စွမ်းအင်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နည်းပညာနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း စသည့်ကဏ္ဍများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါအားတိုက်ဖျက်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ကြီးမားသောအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်တရုတ်နှင့် ကာကွယ်ဆေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကောင်းမွန်စေရန်မျှော်လင့်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အီရန်အစိုးရသစ်သည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်အာရှနိုင်ငံများကိုအလေးထားကာ အီရန်အား SCO တွင် တင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရန် တရုတ်၏ထောက်ခံမှုကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ အီရန်နျူကလီးယားကိစ္စ၊ အာဖဂန်နစ္စတန် ကိစ္စ နှင့် အခြားကိစ္စရပ်များတွင် အီရန်အစိုးရသစ်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ နှင် ညှိနှိုင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုပိုမိုခိုင်မာလာစေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း Abdollahain ကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်၊ (Xinhua)
DUSHANBE, Sept. 17 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi and Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian vowed to promote bilateral cooperation when they met here on Thursday.
The new Iranian government attaches importance to neighboring countries and Asia, appreciates China’s support for Iran to becomeafull member of the SCO, and is willing to strengthen communication and coordination with China on the Iranian nuclear issue, the Afghanistan issue and others, he added. Enditem